Ubuhle bale mihla kumbindi weBundy! *I-WiFi kunye ne-Air Con* - I-Airbnb
Ubuhle bale mihla kumbindi weBundy! *I-WiFi kunye ne-Air Con*
Hlala nathi kwaye wonwabele iintloko zeshawari ezitofotofo, iibhedi ezithambileyo zesikhumba kunye namaqhekeza obugcisa anomdla. Sinayo yonke into obuyikhangela ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava emozulu ongasoze ulibaleke ibe bubusuku obunye, iveki enye, okanye inyanga enye.
Le propathi entsha enobuhlobo yosapho inesitayile esihle kunye nobucukubhede kubantu abadala kunye negumbi labantwana eligcwele izinto zokudlala kunye nebhodi yetshokhwe ukuze bonwabise iiyure.
Unokude u-odole i-gourmet okanye i-pampering hampers ekufikeni kwakho.
Sinayo yonke into oza kuyidinga ukuhlala ubusuku, iveki, inyanga okanye ngaphezulu.
-Umoya womoya kwiplani evulekileyo yendawo yokuhlala kunye negumbi lokulala likaMaster.
- Ukupaka kwigaraji yabucala
- Imfihlo epheleleyo
- Ukulala ukuya kwiindwendwe ezisi-8
- Ikhitshi emiselwe ngokupheleleyo
-Izinto ezisisiseko zasekhitshini (ubisi, iti, ikofu, amanzi, iisosi njl.njl)
- IFacilities yokuhlamba iimpahla ngokupheleleyo
- Indawo yokutyela yangaphandle
- Isitulo esiPhezulu, iPort-a-cot, Stroller
-Ibloko epheleleyo yokuvala iimfama kumagumbi okulala.
Isantya esiphezulu esingenamkhawulo we-NBN ye-Intanethi kunye nomabonakude aba-2 baqinisekisa ukuba zonke iimfuno zakho zokuzonwabisa zigutyungelwe.
Buyela kwi-Master Bedroom kwaye uya kufumana ibhedi etofotofo kakhulu, iTV yabucala, iyunithi yokupholisa umoya kunye ne-ensuite epheleleyo. Usenokufuna ukulutshixa olo cango kwaye ungaze uhambe.
Kukho igumbi elinegumbi lokuhlambela elinabantwana abathathu (elinebhokisi yokudlala kunye nodonga lwetshokhwe yokuzonwabisa) okanye igumbi elinamawele liya kuqinisekisa ukuba abahlobo okanye usapho lwakho nalo luya kuba nokuhlala okuthandekayo.
Igumbi lokuhlambela eliphambili lineshawari enkulu enentloko yeshawari yemvula etofotofo awusoze ufune ukuyishiya kunye nezibane ezishushu zokufudumeza ebusika. Indawo yokuhlamba impahla kunye nekhitshi emiselwe ngokupheleleyo iqinisekisa ukuba zonke iimfuno zakho ziya kufezekiswa nokuba lixeshana elifutshane okanye ixesha elide.
Khululeka ngaphakathi esofeni kwindawo epholileyo yomoya, okanye utye kwiyadi yangasese ejikelezwe yimithi emikhulu kwesi sitrato.
4.78 · Izimvo eziyi-88
Ibekwe kumbindi weBundaberg le ndawo ikufutshane nayo yonke into.
IREDS yeKofu-Ifumaneka kwisitrato saseWalker lulungiso lwakho lwekhafeyini yasekuseni. Ukukhonza umxube we-Byron Bay Coffee, le kofu imnandi ngokuqinisekileyo iya kuluqalisa usuku lwakho kakuhle! - 9 imizuzu yokuhamba, 2 imizuzu yokuqhuba.
FoodWorks-Ecaleni kweREDS yeKofu yintsimbi yesi-7am ukuya kweyesi-9pm, iintsuku ezisi-7 ngeveki iFoodworks. Iluncedo lokuchola ezo ngcinga zincinci.
IZikhemesti zaseMalouf - kwindawo enye neREDS kunye neFoodwoks eMalouf Pharmacy. Yonke into oyifunayo kwiChemist egcwele ngokupheleleyo.
Umzila kaloliwe ongaphantsi komhlaba - Kwakhona, kwiziko elincinane elinye yindlela yangaphantsi. Isidlo esikhulu sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa.
I-PJ Witt Fish N Chips-Ivenkile yesiNgesi yeentlanzi kunye neeChips ezinezinto ezizodwa zemihla ngemihla! Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube lapha ngoLwesibini, Ungaphoswa 2 for 1 Hamburger ebusuku! I-hamburgers emangalisayo! Ukuhamba ngemizuzu emi-5 kwiBarolin St.
Sifumaneka nge-24/7 ngeFowuni ukuze siqinisekise ukuba unokonwaba kwaye uyonwabisa.